Indawo emanyanisiweyo-Isisombululo esifunwa yi-Geo-Engineering-iGeofumadas
Matshi, 2019 Zobunjineli, ezintsha, Microstation-Bentley, Topography
Kuya kufuneka siphile umzuzwana oqaqambileyo kwinqanaba apho uqeqesho, iinkqubo, abadlali, indlela kunye nezixhobo ziguqukela kumsebenzisi wokugqibela. Imfuno kwicandelo lobunjineli be-geo namhlanje kukuba ube nezisombululo apho into yokugqibela inokwenziwa kwaye ingeyiyo nje iinxalenye; njengoko behlala kunjalo, nangona -si yaqonda-Ukuba iimeko zokubeka emgangathweni, ukunxibelelana kunye nenkqubela phambili yezobuchwepheshe bezingasoloko zithathwa njengezinto ezibonakalayo namhlanje.
Ngokusekelwe kule, ekuzimanyeni yokugqibela kubathengisi eziphambili izisombululo Geo-zobunjineli iye ukuqinisekisa ukuhamba rhoqo evela neembono, ngokuthi ekufunyanweni amagalelo entsimini, ngumzekelo, uyilo, ukwakhiwa kunye noyilo yale result kwimimandla yokusebenza eya kunika into eqhubekayo; kuba sisakhiwo, ibhuloho, isityalo okanye indawo ekhuselekileyo yehlathi. Ngoxa ngaphakathi ngaphakathi kwazo zonke ezi zinto zenziwe ngeefayile ezithwala umzimba wazo, zombane, zomthetho, umsebenzi okanye imakethi yobomi, kuyinyani ukuba ezi zi-radiographs kuphela eziza kuthanda umdla.
Njengomzekelo kule «Indawo esiDibeneyo», indlela yokuvela kwezixazululo zoQhagamshelo zoQhagamshelo ezinomdla, apho umenzi abhengeze ukucinywa kwezicelo ezikhoyo phakathi kuka-2019 no-2021, isuka kwizisombululo ezininzi (ezimbalwa) kwezimbalwa apho iinkqubo ezinkulu zoku umjikelo. Ukulungiselela le nto, ibonakalisile ixabiso lokufunyanwa kwezinto zamva nje, iyidlulisela kumsebenzisi ngesisombululo esithe ngoku sakwazi ukubona kwiziganeko zamva nje eSingapore naseLondon.
Yintoni ibhetri yeBentley
Njengomgca ophambili, sele sitshilo, izisombululo ezihlanganisiweyo. Ukujonga ukongeza ixabiso kubasebenzisi njengesiphumo sotyalo-mali olwenziwe ekufumaneni nasekuphuhlisweni kwezixhobo zamva nje-kodwa ke, ukudibanisa iinkqubo zomsebenzisi wokugqibela-. Ngendlela enomdla, asisaziboni izisombululo kuthotho olutsha lwe-CONNECT evakala ngathi ngamagama anjenge «Topography (Siteworks / geopack)», eqondwa njengeyona ndlela ilula yokufikelela esiphelweni; Kuba akukho mntu wenza i-DTM ukuyipeyinta kakuhle kwaye uyixhome eludongeni; Yonke imodeli yendlela iyahamba kuba kulindeleke ukuba iphuhlise iziseko zophuhliso okanye uphuhliso lwedolophu / lokusingqongileyo kuyo.
Emva koko kukho ukuhlanganiswa okudibeneyo kunye namaqabane aqhinga aseBentleySystems, afana Topcon ekupheleni kokubanjwa kunye nokucatshungulwa kwamanqaku entsimini; Microsoft eya kuphucula unxibelelwano lwe-Azure, ukwamkelwa ngenjongo yokwenziwa komsebenzi -akukho nwabisa-yinyaniso eqinisekisiwe ngezisombululo eziphazamisayo ezinjenge-Holo-lens2 kunye nento enendawo yokuhlala ye-Bing; Siemens eya kuhamba kwi-Intanethi ye-bonke abanye-Izinto kunye nobunzima bamawele edijithali abekwe phambili kubunjineli bemizi-mveliso. IBentley ngekhe ibe ngumzekelo kumjikelo wobomi beziseko zophuhliso-ncinane-.
Ngaloo ndlela, izisombululo ezine eziphambili ukuguquguquka zi:
I-Microstation Connect Edition
Oku kuyakuqhubekeka sisixhobo sokubonisa ngokwesiqhelo, ngonxibelelwano olucocekileyo, ukufundisa okunxulunyaniswa nokusetyenziswa kwezixhobo kunye nohlaziyo oluzenzekelayo ngaphandle kwesidingo sokufakwa kwakhona. Kananjalo ngenkqubo yokumodareyitha, iya kuza nezichazi-magama ezisekwe kwiipropathi zento, ukunika ingxelo ngokulula kunye nokubonwa okuthe tyaba. Ngokubhekiselele kwizixhobo, ukulungelelaniswa okukhulu okuqinileyo, ukulungelelaniswa kwangaphakathi kunye nokubonakaliswa kweefoto-ezibonakalayo kulindeleke. Okokugqibela, ngokubhekisele kwinto enokubakho, ukulawulwa okukuko ngakumbi kweefayile ezinkulu kuyafuneka, ukuphucula ngakumbi ii-bits ezingama-64 kunye nokunxibelelana nelifu.
Ngaloo nto, iya kuba yisefile yokudweba. Efuna ukukwenza i-DGN ifikeleleke ngakumbi nge-API evulekileyo kwaye idibaniswe neeHobs, kumgca we-I-model.js. Oku kulindeleke ukuba kusindiswe ukusetyenziswa kwezisombululo ezithe nkqo.
Ngenxa yendlela esebenza ngayo isoftware yeBentley, enefayile ye-dgn kunye nophuhliso oluzinzileyo ixesha elide, kuya kuba ngumdla ukubona indlela abasebenzisi abathembekileyo ngokuthe ngcembe abazamkela ngayo izisombululo eziguqukileyo. Ewe iya kuxhomekeka kwifayile ye- ixabiso elongezelelweyo kunye neendlela zokuguqula iphepha-mvume ezibonelelwa yinkampani kwisoftware njengenqanaba lenkonzo. Nangona kungasothusi, ukuba uninzi luza kuhlala lungaphaya kwexesha lenkxaso elinikiweyo, ukusuka kwinto esiyibonileyo ukuza kuthi ga ngoku kwiinkqubo esele siziphumezile. Oluqwalaselo lisebenza kubuninzi bezicelo ezikhoyo apho ixesha elichazwe kwizixhobo ezililifa lothotho LOKUKHETHA kwaye lwenze indlela yoluhlu olutsha olubizwa ngokuba luQhagamshele.
Ilayisenisi zelifa ngaphambi kokuba u-SELECT Series ezifana ne-V8, i-XM kunye ne-2004 abayi kusayixhaswa.
Iisenisi zeenguqulelo zokuqala zokukhetha, sifuna i-1 kunye ne-2, iya kuba nayo Inkxaso kuze kube nguJulayi we-2019.
Iilayisenisi zeenguqulelo zakutsha ze-SELECT Series ziya kuba nenkxaso kuze kuJanuwari we-2021.
Iilayisenisi zoqhagamshelwano lwe-CONNECT aziyi kuba nokuphazamiseka kwenkxaso.
I-OpenRoads Connect Edition
Esi iya kuba sisisombululo kulwakhiwo lwendlela, kunye nokusebenza okungaphakathi kovavanyo, imodeli, kunye naphantsi kwendlela yomjikelo wobomi. Yiyo loo nto isizathu sokuba iBentley yongeze ixabiso kuthengiso lwamva nje, njengenkampani elawula ukubhalwa kweendlela eUnited States; Makhe sicinge nje ngebhakhowudi ebandakanya iimpawu zempahla enxulunyaniswa noyilo, ulwakhiwo, ukugcinwa, ukwanda okanye ukudilizwa kwefayile.
Indawo emanyanisiweyo ayisombululwa ngokuqhagamshela idatha. Oko kwenza isixhobo sekhompyuter silungile okanye sibi. Inkqubo yokudityaniswa iyimfuneko.
Amandla othethathethwano nabachaphazelekayo (abantu), idatha, kunye nokuhamba komsebenzi kulindeleke; Ukuzenzekelayo kwifayile yeprojekthi yokwakha (uhlahlo-lwabiwo mali kunye nokucwangciswa kwexesha). Ngokudibana nomxholo, ukwamkelwa okungcono kulindelwe kwimisebenzi enje ngokuhlola kunye nolawulo lweeasethi, ezibandakanya ukuvavanywa kweemeko ezikhoyo, ukumodareyithwa kwezinto ezakhelweyo kwidatha eqokelelwe ebaleni ngendlela yemigca ebonakalayo. . Ngokubhekisele ekusebenzisaneni, ukubheja kukudlula kwimodeli yedatha, ukuya kwiinkqubo zokuba ukwazi ukuthetha ulwimi olufanayo neRevit (ukusuka kwi-Autodesk), iTekla (evela kwiTrimble), phakathi kwabanye.
Kucacile ukuba uninzi lwezinto ezenziwayo zesisombululo esime nkqo ziya kujolisa kwiselfowuni, ubuncinci yeyiphi iProjekthiWise / AssetWise exhasa ngasemva, kodwa kuya kufuneka bathethe nesisombululo sedesktop (Microstation). I-OpenRoads iphakamisa ukuba inyanzelise ukutshintsha kweparadigm yokwahlulahlula phakathi kwe-surveyor, umakhi, umyili kunye nomqhubi; ukubanakho ukusebenza kwimodeli yobomi yokwenyani, kunye nokusetyenziswa kotshintsho kuyilo ngexesha lokwenyani kunciphisa amanyathelo, iifom kunye nezo zikhewu sinazo, kuthi abo baphuhlise iiprojekthi iikhilomitha kude neofisi, kunye ne-36 degrees centigrade temperature kunye uxinzelelo lokuphelelwa lixesha ngenxa yemozulu engekho mhle.
Umceli mngeni omkhulu, kuthathelwa ingqalelo ukubheja okubizelwe yiPortos «Iimodementi eziqhelekileyo«, Apho kuthenjwa ukuba i-axis yendlela edibanisa izixeko ezibini yinto ephilayo, ukuba ukuqonda njengemodeli yeshishini kubaluleke kakhulu kumnini-mvume yabucala, kodwa amawele ayo edijithali ziifayile apho kukho ubunyani kwiipasile ezikufutshane ezo zichaphazela okanye zithintele ukusetyenziswa njengendlela yokuphungulwa kwendlela, enoyilo lwejiyometri olunxulunyaniswa nokugcwala kunye nesantya, kunye nolwakhiwo lomzimba olunxulunyaniswe nebhajethi yeendleko zeyunithi ezaphukileyo zaba zizinto zokusebenza, ezabasebenzi, izixhobo kunye nezivumelwano. Inxalenye yexabiso elongeziweyo lokudibanisa ukufunyanwa kwakutshanje njengeSynchro, AlWorx kunye neContextCapture kunye neAssetWise. Ingqondo yolawulo lwedatha endifuna ukuyibona!
I-OpenBuildings Connect Edition
Apha siza kubona umzamo omkhulu wokufumana into esele yenziwe yi-AECOsim, njengesisombululo esipheleleyo sabayili bezakhiwo kuloo ndlela yokuhamba evumela ukuba kugqitywe imiqulu, izithuba, ukusebenza, ukuhamba; kunye neenjineli kuyilo lwezinto zokufaka imibhobho yamanzi, umbane, iinkqubo zomoya, njl. Ukongeza, olu luyilo lujolise ekubandakanyeni ukudityaniswa okuyimpumelelo kunye neendleko kunye nenkqubo yokuphunyezwa kwayo (iSynchro), kubandakanya imodeli kunye nokubeka iliso ekuhanjisweni kweprojekthi, kulawulo lwangaphakathi njengempahla kunye nokufakwa kwayo kwimeko yokuthengiswa kwezindlu kunye neqela lokuqala elinomdla kuyo yonke le nto utyalo-mali.
Ukusebenza okucetywayo kusekwe kwinto enokubakho yokulula kwe-CAD ukuya kumgangatho we-BIM, ngokunokwenzeka ukukala ukusuka kuyilo oluncinci ukuya kulwakhiwo oluntsonkothileyo. Isithembiso sokuthobela imigangatho ye-IFC kunye ne-ISM siyathembisa, esiya kuba lithuba elihle lokudibanisa abantu, idatha kunye neeprojekthi kulwahlulo loluleko oluququzelela ukusebenza okulula, njengoko bekuyiprojekthi ecwangciswe kakuhle necwangcisiweyo phaya phambi kokuba isoftware ize. . Njengakwi-OpenRoads, ii-OpenBuildings zibandakanya umxholo wokwenza ubume kunye nemodeli yokusingqongileyo, ukubanakho ukuvelisa iziphumo zokufota kumhlaba osuka kumafu amafu kunye nokuqhubeka kokubanjwa kweemodeli zeefoto.
Kulo mzekelo ilungileyo, OpenBuildings lifuna kwindawo eqhelekileyo, kuba isisombululo ukuba ukuntsonkotha inkcukacha wakhiwe a porcelain magumbi nazo zonke izinto zayo, kuzo zonke iinkalo ezifana uhlalutyo HVAC (kwamandla, umoya, ukukhanyisa, njl.)
Ukwahlula kwizisombululo zamanye amasebe obunjineli, ngokukodwa yi-STAAD yeenjineli zesakhiwo. Kucacile ukuba oku kuvela kwiinjineli zoluntu umdla wazo ungaphaya kokwenza izakhiwo zokuhlala.
Kuyabaluleka, ukuba le nguqulo iza neekhowudi ezingaphezu kwama-90 zamazwe aphesheya kunye nokusebenza kwezinye izinto zokwenza imisebenzi ezifuna uyilo lolwakhiwo; ikwabonelela ngokudityaniswa kokuhamba okuhamba phakathi koyilo lomzimba, uyilo lohlalutyo kunye nemodeli emacala mathathu; NjengaseOpenBuildings, kuya kubandakanya ukusebenzisana neRevit, iTekla kunye nokuhamba komsebenzi okubandakanyiweyo kumphononongi-umyili - injineli yommeli- ubudlelwane boomatshini / bobunjineli boomatshini.
Ngenxa yoko uvalo kulindeleke ukuba ukwandisa amaxesha uhlalutyo de amaxesha 200 phezu iinkqubo zemveli; umdla uyilo zolwakhiwo kunzima imishini nokubuyisela sweatshop, kodwa optimizable xa uqhagamshele unxibelelana nabanye iinkalo kunye nolawulo ithuba iiprojekthi ezinkulu.
Okokugqibela, kwezi zinto ziphambili zi-5 zothotho lweCONNECT, kukho umxholo waManzi. Kubonakala ngathi ukubheja kuyimpumelelo ngokupheleleyo, kuthathelwa ingqalelo ukuba umfuziselo, uyilo kunye nolwakhiwo alunakwahlulwa kule nto yokuba, ngaphaya kokunxulunyaniswa neentlekele zendalo, kubandakanya umdla kwimbambano yendalo esingqongileyo kunye nobutyebi bexabiso eliphezulu kumashumi eminyaka ezayo.
Nantsi indibaniselwano enkulu ne-geospatial kulindeleke, ibekwe phambili kwii-BingMaps kunye nee-BingRoads (ezivela kwiQabane leMicrosoft). Umxholo wothungelwano lwamanzi iBentley sele luyenza kakuhle, kwinqanaba lokusebenza, nangona linomthamo wokubonwa okulinganiselweyo, apho sinokulindela ukuba ibe nomtsalane ngakumbi; kunjalo ukuba bayayiphucula ingxelo kunye nokuntywiliselwa kokusebenza kunye nemo yendawo / iziseko zophuhliso ziya kuba ntle.
Kuya kuba kuhle ukumbona ehlala kulo nyaka eSingapore, apho uya kubonisa ngokuqinisekileyo iprojekthi esele ihamba phambili kule ngqiqo enethemba lokunyusa UQHUBELELO loQhagamshelwano ngendlela enqamlezileyo. Oku kubonwe zizisombululo ezicacileyo kunye nohlahlo-lwabiwo mali, uhlobo lwenkqubo yokwakha, malunga ne zixeko kunye ne-Intanethi yezinto ezinokuthi ngeli xesha zinqamlezayo, zingenamsebenzisi othile -ngoku-. Into eqinisekileyo kukuba banokongeza ixabiso elininzi ukuba babekwe ngendlela yemibono kwityathanga lexabiso elisuka kulawulo lolwazi ukuya kulawulo lokusebenza; ngokubhekisele kwityathanga elinokubakho kubasebenzisi bobuchwephesha I-GIS-CAD-BIM - DigitalTwin -SmartCity kodwa ngaphantsi kwenkqubo yelensi Ukubamba-Ukuguqula imodeli-uyilo-uLwakhiwo-kuSebenza.
Kuya kuba kuhle ukubona ukubheja kwabanye abakhuphiswano abanesishwankathelo. Kuya kubakho ixesha lokuthetha ngabo.
Siyavuyisana nokuzibophelela kwizisombululo ezibanzi, ezona zinto zincinci ezilindelwe ngabasebenzisi ngokwe-Geo-Engineering; umdla wabo ophambili ulula ekunciphiseni amaxesha, ukunciphisa iindleko kunye nokulandeleka. Ewe kunjalo, oku kuthetha ukuba izisombululo zivumela ukudibanisa amaqela abantu, ukuhamba komsebenzi kulawulo olupheleleyo lomjikelo weprojekthi.
Post edlulileyo«Ngaphambilini I-Digital Water Works, Inc. ifumana utyalo-mali olusisiseko kwi-Bentley Systems
Post Next I-Oracle nguMxhasi oManyeneyo kwiQonga leHlabathi le-Geospatial ye2019Okulandelayo »